Prometheus In The New Age: လင်ကွန်း၏ ဂက်တီးစဘက် မိန့်ခွန်း
အမေရိကန်သမ္မတ လင်ကွန်းရဲ့ ကမ္ဘာကျော် ဂက်တီးစဘက်မိန့်ခွန်းပါ။ မင်းကျော်စွာ (ဆရာဦးဝင်းတင်-EFA) ဘာသာပြန် ခဲ့ပါတယ်။
လွန်ခဲ့တဲ့ အနှစ်ရှစ်ဆယ့်ခုနစ်နှစ်က ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ဖခင်များဟာ ဒီအမေရိကတိုက်ပေါ်မှာ နိုင်ငံသစ်တစ်ခု မွေးဖွား ပေးခဲ့ပါတယ်။ ဒီနိုင်ငံဟာ လွတ်လပ်ခြင်းမှာ သန္ဓေတည်ပြီး၊ လူးသား အားလုံးကို တန်းတူရည်တူ ဖန်တီးထားတယ် ဆိုတဲ့အချက်ပေါ်မှာ ရည်စူးမြှုတ်နှံထားတဲ့ နိုင်ငံ ဖြစ်ပါတယ်။
ခု ကျွန်တော်တို့ဟာ ပြည်တွင်းစစ်ပွဲကြီး တစ်ပွဲကို ဆင်နွှဲနေရပါတယ်။ ဒီစစ်ပွဲဟာ အဲဒီနိုင်ငံ ဒါမှမဟုတ် ဒါလောက် လွတ်လပ်ခြင်းကို စိတ်ကူးပုံဖေါ်ခဲ့တဲ့ ဘယ်နိုင်ငံမဆို ကြာရှည်ခံနိုင်ရည် ရှိမရှိ စမ်းသပ်တဲ့ စစ်ပွဲလည်းဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ဟာ အဲဒီစစ်ပွဲကြီးရဲ့စစ်မြေပြင်တစ်ခုမှာ တွေ့ကြခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ဟာ အဲဒီ စစ်မြေပြင်ရဲ့ အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုကို ဒီနိုင်ငံရှင်သန်ဖို့ အသက်ပေးခဲ့ကြသူများရဲ့ နောက်ဆုံး နားခိုရာအဖြစ် သတ်မှတ်ဖို့ ရောက်လာကြခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ ဒီလို လုပ်တာဟာ အင်မတန် မှန်ကန်သင့်လျော် ပါတယ်။
ဒါပေမယ့် ကျွန်တော်တို့ဟာ ဒီနေရာ၊ ဒီမြေပြင်ကို ပိုမိုကျယ်ပြန်တဲ့ သဘောနည်းနာ အရတော့ မြင့်မြတ်တဲ့ နယ်မြေအဖြစ် မသမုတ်နိုင်ပါဘူး။ ဒီမှာ တိုက်ပွဲဝင်ခဲ့ကြတဲ့ သူရဲကောင်းများ (ကျဆုံးသူများရော အသက်ရှင်နေ သူများပါ)၊ အဲဒီသူရဲကောင်းများက ကျွန်တော်တို့ရဲ့ နုံနဲ့လှတဲ့ အာဏာနဲ့ ထပ်ဖြည့်ဖို့၊ နှုတ်ယူဖို့ မလိုအောင် ဒီနေရာကို မြင့်မြတ်တဲ့ နယ်မြေအဖြစ် သမုတ်ခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ ဒီမှာပြောခဲ့တဲ့ စကားတွေကို ကမ္ဘာက ကြာရှည်လေးမြင့် မှတ်မှတ်ရရ ဖြစ်မှာမဟုတ်ပေမဲ့ အဲဒီ သူရဲကောင်းတွေရဲ့ လုပ်ရပ်ကိုတော့ ဘယ်တော့မှ မေ့မှာမဟုတ်ပါဘူး။ အသက်ရှင်နေတဲ့ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ တာဝန်က ဒီမှာ တိုက်ပွဲဝင်ခဲ့ကြသူများ ရှေ့က စွမ်းစွမ်းတမံ လုပ်ပြသွားတဲ့ မပြီးသေးတဲ့ လုပ်ငန်းတွေမှာ ဘ၀ကိုမြှုပ်နှံ လုပ်ကိုင်ကြဖို့ ဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ရှေ့မှာ ကြီးမားမြင့်မြတ်တဲ့ လုပ်ငန်းတွေ ရှိပါတယ်။
* ဂုဏ်ပြုခံ ကျဆုံးသွားသူများ နောက်ဆုံးအချိန်ထိ အပြည့်အ၀မြှုပ်နှံ လုပ်ဆောင်သွားတဲ့ လုပ်ငန်းတွေကို တိုးမြှင့်မြှုပ်နှံ လုပ်ဆောင်သွားဖို့၊
* ဒီ ကျဆုံးသွားသူများဟာ အချည်းနှီးကျဆုံးသွားတာ မဟုတ်ဘူးဆိုတာ စိတ်ထဲမှာ မြင့်မြင့်မားမား ပိုင်းဖြတ် ထားဖို့၊
* ဘုးရားသခင်ရဲ့ စောင့်ရှောက်မှုအောက်က ဒီနိုင်ငံမှာ လွတ်လပ်ခြင်းဟာ အသစ် မွေးဖွားလာပြီး ပြည်သူ လူထုအတွက် ပြည်သူလူထုက ရွေးကောက် တင်မြှောက်တဲ့ ပြည်သူ့အစိုးရဟာ ကမ္ဘာမြေပေါ်က ဘယ်တော့မှ ပျောက်ကွယ်မသွားဖို့၊ကျွန်တော်တို့ ရည်စူးလုပ်ဆောင်ကြရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
"Fourscore and seven years ago our fathers brought forth on this continentanew nation,conceived in liberty and dedicated to the proposition that all men are created equal.Now we are engaged inagreat civil war, testing whether that nation or any nation so conceived and so dedicated can long endure. We are met onagreat battlefield of that war.We have come to dedicateaportion of that field asafinal resting-place for those who here gave their lives that that nation might live. It is altogether fitting and proper that we should do this.But inalarger sense, we cannot dedicate, we cannot consecrate, we cannot hallow this ground. The brave men, living and dead who struggled here have consecrated it far above our poor power to add or detract.The world will little note nor long remember what we say here, but it can never forget what they did here. It is for us the living rather to be dedicated here to the unfinished work which they who fought here have thus far so nobly advanced.It is rather for us to be here dedicated to the great task remaining before us - that from these honoured dead we take increased devotion to that cause for which they gave the last full measure of devotion - that we here highly resolve that these dead shall not have died in vain, that this nation under God shall haveanew birth freedom, and that government of the people, by the people, for the people shall not perish from the earth."
"တစ်ချက်လေး ချော်လဲတာပါပဲ... သေသွားလို့ ပြန်မထနိုင်တာမှ မဟုတ်တာ။"
"လူတချို့ ကို အမြဲတမ်း အရူးလုပ်လို့ရချင် ရမယ်။
လူတွေအားလုံးကိုလည်း တစ်ခါတစ်ရံ အရူးလုပ်လို့ရချင် ရမယ်။
ဒါပေမဲ့ လူအားလုံးကို အမြဲတမ်း အရူးလုပ်လို့ တော့ မရနိုင်ဘူး။"
“The tree of liberty must be watered periodically with the blood of tyrants and patriots alike.
Thomas Jefferson quotes (American 3rd US President (1801-09)
Posted by အလင်းဆက် at 10:55 PM